Uhlelo Esihlalweni sangaphambili impumelelo yombukeli
- Lolu chungechunge alukhulumi ngokudonsela abantu esiteshini kepha ludonsela kuJesu, kusho uPer Åkvist.
Isithombe: Izwe namuhla.
Impumelelo yochungechunge lwezinhlelo ze-Himlen TV7 esihlalweni sangaphambili ibishesha.
Ngibe yingxenye yohlelo lokuqala emkhankasweni we-Himlen TV7 wokuvangela esihlalweni esingaphambili. Kuze kube manje, seziqoshwe izinhlelo ezingama-22, futhi ngaphezu kohlelo lwami, kukhonjiswe olunye uhlelo olunye. Kulolo hlelo, kuxoxwa noFaisal Alami, osekhasini lohlelo ochazwa ngokuthi " wayeyinkosi yezidakamizwa phezu kukaLidingö ". Impumelelo yalezi zinhlelo ibe ngokushesha.
"Uhlelo lolu belivele lumayelana nawo wonke umuntu uma kukhulunywa ngokubuka. Belukhuluma nangehlelo lwethu oluthandwa kakhulu kuze kube yimanje, i-Israel News, olusakazwa njalo ebusuku," kusho uPer Åkvist.
Uchungechunge oluthi "Esihlalweni esingaphambili" lukhiqizwe ngumvangeli wesiteshi se-TV uPer Åkvist. Isikhathi esingangekota yehora, uzulazula ngezimoto zikanokusho ezibolekwayo futhi ukhuluma nomgibeli ohlanganyela ubufakazi bakhe futhi okhuthaza umkhuleko.
"Bekumele ngime ngisule izinyembezi zami ngesikhathi sokuqoshwa. Bese kuba yinjabulo enkulu ukuzwa abantu bekhuluma ngezikhathi zabo zokushintsha impilo benoJesu," kusho uPer Åkvist.
Izinhlelo ezimbili zisakazwe kuze kube manje
Umhlaba namuhla uyabhala :
Izihambeli eziwombeni ezimbili ezisakazwe kuze kube manje yi-blogger uChrister Åberg noFaisal Alami, ngokulandelana, abasekhasini lohlelo abachazwa ngokuthi "babeyinkosi yezidakamizwa phezu kukaLidingö".
Faisal Alami | Esihlalweni esingaphambili (umthengisi wezidakamizwa othole ukuthula noNkulunkulu)
"UFaisal wayeyinkosi yezidakamizwa phezu kukaLidingö futhi wabusa ngokwesaba. Ngesikhathi impilo iqala ukonakala, wazinikela phambi kweNkosi uJesu."
UChrister Åberg | Esihlalweni sangaphambili (Kulahlekelwe amalungu omndeni amabili kepha ngathola indlela ebuyela enjabulweni)
"Ukuphela kwento ethwele uJesu. UChrister Åberg ubhekane nalokhu ngezinselelo ezinzima zokuphila. UChrister uyi-blogger nomlobi futhi usebenzisa i-apg29.nu, phakathi kwezinye izinto."
U-Himlen TV7 unethemba lokuthi amabandla nabantu ngabanye bazolwamukela lolu hlelo njengethuluzi ekushumayeleni kwabo. Njengamanje, imicabango iyakhula yokuthi umbukeli angakwazi kanjani ukuthola ibhayibheli noma okunye okulandelayo, kubhala umhlaba namuhla.
Bukela izinhlelo ezizayo ku- Himlen TV7 .
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 08:53